Amụma nzuzo -
Amụma Nzuzo Ụlọ ọrụ
Ihe ị na-enye anyị
Iji Ozi E nwetara
Otu esi echebe gi
Iwu Nchịkwa Na Ịkekọrịta
Onye anyị nwere ike igosipụta data
Imelitere ikpeazụ: 24 May 2018
Ozi gị dị anyị mkpa dịka ọ dịịrị gị ma anyị agbachitere iji kpuchido ozi gị. Usoro Nzuzo a na-akọwa ihe ọmụma CompanyHub na-anakọta, otu o si achịkọta ozi gị site na ntanetị di iche iche di iche iche na otu o si eji ozi anakọtara. A na-arịọ gị ka ị nyochaa Nzuzo Nzuzo a tupu (i) iji CompanyHub Web / Mobile applications, (ii) ịnweta na ịdenye aha na ụlọ ọrụ webhub.com na / ma ọ bụ (iii) iji saịtị na ngwa niile metụtara, ngwa, ọrụ na ngwaọrụ , n'agbanyeghị otú i si enweta ma ọ bụ jiri ya. Maka nzube nke ịmatakwu nke ọma, ngwa ụlọ ọrụ Company, ebe nrụọrụ weebụ na saịtị niile, ngwa, ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche a na-ezo aka na ya dika 'COMPANYHUB PLATORORM'.
Anyị na-enye gị ikike ijikọ ma ọ bụ jiri Ụlọ ọrụ CompanyHub site na iji interface weebụ. Ntinye nke Nzuzo Nzuzo a na-emetụta nbudata weebụ niile na ojiji nke CompanyHub Platform.
Site na ịbanye na CompanyHub Platform na site na ịnye ozi achọrọ, ị kwenyere na Nzuzo Nzuzo anyị. Anyị debere ikike anyị ịgbanwe ma ọ bụ mee mgbanwe kwesịrị ekwesị na Nzuzo Nzuzo a site n'oge ruo n'oge, nke ga-adị irè na nhazi ya. Anyị ga-akpachi gị naanị n'ọnọdụ ikpeebee nwere mgbanwe dị ukwuu na Nzuzo Nzuzo a. Ịga n'ihu iji Ụlọọrụ CompanyHub, mgbe ị natachara nkwupụta dị otú a, ga-ewere ya dị ka ihe ị na-anabata na mgbanwe.
Ngwaahịa na Ọrụ nke CompanyHub Platform na-enyeghị ndị nọ n'okpuru afọ iri na atọ (13). Ọ bụrụ na ị bụ obere, anyị na-arịọ gị ka ị ghara ịkekọrịta data nkeonwe ma ọ bụ jiri Ngwa na / ma ọ bụ Ọrụ anyị.
Anyị na-anakọta ozi ị nyere anyị ma ọ bụ kwere ka anyị nweta. Ozi nwere ike ịgụnye, ma ọ bụghị njedebe aha, onyinyo, ụbọchị ọmụmụ, email na / ma ọ bụ adreesị ahụ, ekwentị na / ma ọ bụ nọmba ekwentị, okike, listi ịkpọtụrụ, ozi mgbasa ozi na profaịlụ, ọnọdụ (GPS) ozi, ọrụ na ịrụ ọrụ ozi na mgbe ozi dị mkpa gbasara ụdị ego ịkwụ ụgwọ / kaadị akwụmụgwọ / akaụntụ akụ. Ị na-ekweta na ị na-ekpughe ozi ndị a n'onwe gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike igosipụta ozi ndị a, nke ị nwere ohere ịme, ọ ga-ekwe omume na ị gaghị enwe ike ị nweta ụfọdụ ọrụ na Ụlọọrụ CompanyHub.
Anyị nwere ike ịnakọta ụdị ozi ndị a na-akpaghị aka iji nye gị ohere na ịnweta CompanyHub Platform, na inyere anyị aka ịhazi ma melite ahụmịhe gị:
Ozi gbasara kọmputa gị ma ọ bụ ịnweta ụlọ ọrụ CompanyHub Platform, Adreesị IP gị, ihe nchọgharị, nsụgharị nchọgharị, sistemụ arụmọrụ, onye ntinye aka, netwọk mkpanaka, echiche ihuenyo, data mgbasa ozi, ihe ndekọ weebụ weebụ dị nro.
Ozi ị nyere iji denye aha ọkwa dị iche iche dịka ozi ntanye, ọrụ nchịkọta kwa ụbọchị, ọkwa ọhụụ, nchetara ọrụ, ọkwa ọkwa mbubata mbubata data, ozi ọhụụ, akwụkwọ edemede na / ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ dịka aha, adreesị ozi-e wdg.
Ozi metụtara ịzụrụ na azụmahịa ọ bụla i tinyere site na CompanyHub Platform dịka aha, adreesị, adreesị ozi-e, ekwentị, kọntaktị kaadị.
Ozi si na usoro ị jikọtara na CompanyHub Platform dị ka akaụntụ email gị, kalenda. Ọ bụrụ na Ị nyere anyị ikikere ịnweta akaụntụ Google / ndị ọzọ gị, anyị ga-adọta mkparịta ụka email gị maka ọnwa isii (6) site na ụbọchị nke ikike ma nọgide na-adọta ruo mgbe ị wepu akaụntụ email. Usoro anyị ga-atụle ozi email ndị a ma kewaa ndị kọntaktị dị mkpa dabere na mkparịta ụka email gị ma jikọọ ozi-e na kọntaktị.
Anyị nwekwara ike ịnakọta ozi site na ma ọ bụ banyere gị n'ụzọ ndị ọzọ, dị ka mgbe ị kpọtụrụ onye ọrụ nkwado ndị ahịa anyị, mgbe ị na-azaghachi na nyocha na / ma ọ bụ n'oge mmekọrịta gị na ndị òtù nke ahịa na ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ nkwado ọrụ. Anyị nwere ike nyochaa ma ọ bụ dekọọ mkparịta ụka ekwentị n'etiti gị ma ọ bụ onye ọ bụla na-emechitere gị na ndị na-akwado ọrụ anyị maka njirimara n'ime ụlọ na maka ọzụzụ. Site n'iso anyị kwurịta okwu, ị kwenyere na a ga-anụrịrị ozi gị, nyochaa ya, ma ọ bụ ederede ya n'enweghị ọkwa maọbụ ịdọ aka ná ntị ọzọ.
Anyị (gụnyere ụlọ ọrụ anyị na-arụ ọrụ na) nwere ike itinye obere faịlụ data na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ. Ihe ndekọ data a nwere ike ịbụ kuki, akara pixel, kuki Flash, mgbama weebụ (mgbama weebụ bụ foto eletrikiiki nwere ike iji mee ihe na ozi-e zutere anyị) ma ọ bụ nchekwa mpaghara ndị ọzọ site na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ ngwa ndị metụtara (kuki "Kuki"). Anyị na-eji Kuki ndị a mara gị dịka onye ahịa; hazie ọrụ anyị, ọdịnaya, na nkwurịta okwu; tụọ arụmọrụ nkwurịta okwu; nyere aka mee ka nchebe akaụntụ gị ghara imebi; eme ka ihe ize ndụ ghara igbochi ya; na iji kwalite ntụkwasị obi na nchebe na saịtị anyị na ọrụ anyị.
Iji nyere aka chebe gị pụọ na aghụghọ na iji aka gị, ozi ọkachamara na azụmahịa, anyị nwere ike ịnakọta ozi gbasara gị na mmekọrịta gị na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ ọrụ CompanyHub Platform. Anyị nwekwara ike inyocha kọmputa gị, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ ngwaọrụ ịnweta ọzọ iji chọpụta software ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla.
UTÚ ECHICHE DERE
Ebumnuche anyị bụ isi n'ịchịkọta ozi onwe onye, ​​ọkachamara na azụmahịa bụ ịnye gị ahụmịhe CRM dị nchebe, nke dị nro, nke ọma, na nke ahaziri ya. A ga-eji ozi anyị nyere anyị site na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka:
Kpọtụrụ CompanyHub maka gị;
Nye nkwado ndị ahịa;
Ozi nhazi na izipu ọkwa / mmelite / ncheta gbasara nzukọ / kọntaktị gị;
Dozie esemokwu, nchịkọta ụgwọ, na nsogbu nsogbu;
Chebe ihe omume machibidoro ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, ma mee ka anyị kwekọrịtara Usoro Nkwado anyị;
Hazie, tụọ, ma melite ọrụ Ụlọọrụ Platform na ọdịnaya, nhazi, na ọrụ nke weebụsaịtị anyị, akụkụ, ngwa na ngwa;
Napụta ọdịnaya echekwara, ahịa, ọkwa ntanetị ọrụ, na onyinye nkwalite dabere na mmasị nkwukọrịta gị;
Kpọtụrụ gị na nọmba ọnụọgụgụ nke ị nyere, site na itinye oku olu ma ọ bụ site na ederede (SMS) ma ọ bụ ozi email;
Zipu ozi, akwụkwọ edemede, ịkwụ ụgwọ na-echetara gị na ịnakọta ego site n'aka gị
Echebe na ịhapụ ozi
Anyị na-echekwa ma dezie ozi gbasara gị site na ngwa anyị kwadoro na "igwe ojii". Ntọala ọnọdụ ebe ịchọta data na-adabere mgbe niile na mbenata nkwụsị na ịrụpụta arụmọrụ kacha mma maka gị na ndị ọrụ gị. Anyị na-edekwa aha anyị na ikikere kwesịrị ekwesị iji hụ na nchekwa weebụ. Anyị na-echebe ihe ọmụma gị site na iji nchebe anụ ahụ, ọrụ ntanetị, na nhazi iji belata ihe ize ndụ nke ọnwụ, iji aka, ohere na-enweghị ikike, nkwupụta na mgbanwe. Ụfọdụ n'ime nchedo anyị na-eji bụ firewalls na data ezoro ezo, njikwa ntanetị aka na ebe data anyị, yana njikwa ikike nnweta ozi.
Anyị anaghị ere ma ọ bụ gbazite ozi nke onwe gị, ọrụ ọkachamara na azụmahịa na ndị ọzọ na-achọghị ka ha bụrụ maka ahịa ha n'enweghị nkwenye doro anya. Anyị nwere ike ikpokọta ozi gị na ozi anyị na-anakọta ma jiri ya mee ka ọ dị mma ma hazie CompanyHub Platform. Dị ka iwu n'ozuzu, anyị na-eji ma gosipụta ozi gị dị ka anyị kwenyere na ọ dị mkpa: (i) n'okpuru iwu dị, ma ọ bụ usoro usoro ịkwụ ụgwọ; (ii) iji mezuo usoro na ọnọdụ anyị; (iii) iji kpuchido ikike anyị, nzuzo, nchekwa ma ọ bụ ihe onwunwe, na / ma ọ bụ nke ndị mmekọ anyị; na (iv) iji zaa ajụjụ site n'ụlọ ikpe, ụlọ ọrụ mmanye iwu, ụlọ ọrụ iwu, na ndị isi obodo na ndị gọọmentị, nke nwere ike ịgụnye ndị isi obodo gị.
Anyị nwere ike ịkekọrịta data nkeonwe gị na ndị ọzọ tụkwasịrị obi dị ka:
Ndị òtù nke ndị nne na nna anyị na ndị enyemaka (ya na ụlọ ọrụ anyị) iji nye ọdịnaya, ngwaahịa, na ọrụ (dị ka ndebanye aha, azụmahịa na nkwado ndị ahịa), iji nyere aka chọpụta ma gbochie omume ndị na-akwadoghị iwu na imebi iwu anyị. Ndị ezinụlọ nke ụlọ ọrụ anyị ga-eji ozi a zite gị ozi nkwukọrịta naanị ma ọ bụrụ na ị rịọrọ ọrụ ha.
Anyị na-ekerịta data na ụlọ ọrụ n'ụwa nile anyị na-achịkwa, ọ bụ anyị na-achịkwa, ma ọ bụ na-achịkwa anyị, iji nye ọrụ anyị.
Anyị na-ekerịta ozi na ndị ọrụ na-enyere anyị aka ịnye ọrụ anyị. Ndị na-ahụ maka ọrụ na-enyere anyị aka na ihe dịka nhazi ịkwụ ụgwọ (ntụgharị ndị nkwụnye ụgwọ, ụzọ nkwụnye ụgwọ), nchịkọta weebụ, nchịkọta data, nkà na ụzụ kọntaktị na ọrụ ndị metụtara, ọrụ ndị ahịa, nnyefe email, na nyochaa. , dị ka ịgha ụgha, ahịa, na ọrụ nkà na ụzụ. Usoro nkwekọrịta anyị na-ekwu na ndị ọrụ a na-eji ozi gị na ọrụ ha na-arụ maka anyị, ọ bụghị maka uru nke aka ha ma ọ bụ imebi iwu nzuzo anyị.
Na ndị mmanye iwu, ndị ọrụ gọọmenti, ma ọ bụ ndị ọzọ dịka ntụsara akwụkwọ, ikpe ikpe ụlọikpe, ma ọ̄ bụ usoro iwu ọzọ ma ọ̄ bụ iwu chọrọ n'aka anyị ma ọ bụ otu n'ime ndị mmekọ anyị; mgbe ọ dị mkpa ka anyị mee nke ahụ iji rube iwu; ma ọ bụ mgbe anyị kwenyere, na naanị uche anyị, na nkwupụta nke ozi onwe onye, ​​ọrụ ọkachamara na azụmahịa nwere ihe dị mkpa iji gbochie mmerụ ahụ ma ọ bụ ụgwọ ego, ikwu akụkọ a na-enyo enyo na ọ bụ iwu na-akwadoghị ma ọ bụ nyochaa mmebi ndị ọzọ.
Ị nweere onwe gị ịrịọ anyị mgbe ọ bụla maka ịmegharị, nyefee na / ma ọ bụ ihichapụ / ehichapụ nke ozi gị echekwara na anyị site na izipu ozi email na support@companyhub.com. Anyị ga-edozi nke ọ bụla ị rịọrọ, n'okpuru iwu njide anyị dị ka ekwuru n'okpuru ebe a,
Ị nwere ohere ịkwụsị Kuki anyị ma ọ bụrụ na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ ihe ntinye ihe nchọgharị, ma ọ bụrụ na achọrọ Cookies iji gbochie wayo ma ọ bụ hụ na nchebe nke weebụsaịtị anyị na-achịkwa. Otú ọ dị, ịkwụsị Cookies anyị nwere ike igbochi gị iji weebụsaịtị na / ma ọ bụ atụmatụ ọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ịchọghị ịnweta nkwukọrịta ahịa anyị ma ọ bụ soro na nkwalite anyị, soro ntuziaka ndị a ga-enye n'ime nkwurịta okwu iji pụọ na nkwupụta ndị ahụ n'ọdịnihu.
N'agbanyeghi arịrịọ gị maka nhichapụ ozi nkeonwe sitere na sava anyị, anyị nwere ike ijigide data onwe anyị maka oge dịka ọ dị mkpa iji mezuo ọrụ anyị n'okpuru Usoro nke iji ọ gwụla ma achọrọ oge njigide oge ma ọ bụ iwu kwadoro, Anyị na-arụzu ọrụ anyị akọwapụtara na Nzuzo Nzuzo a n'oge niile. N'ihi na ị nwere ike ịbịakwute anyị maka ajụjụ ọ bụla na nke a.
Ojiji nke ngwaahịa na ọrụ anyị, na esemokwu ọ bụla na-esite na ha, dị n'okpuru Nzuzo Nzuzo a nakwa yana Usoro Njikere anyị. Biko gaa na Usoro Ojiji, nke na-akọwa usoro ndị ọzọ na-achịkwa iji ngwaahịa na ọrụ anyị.
Site na ịnakwere iwu a, ị kwenyere na usoro nnakọta data anyị, njigide nkwado na iji nkuku kuki dị ka ekwuru na iwu a. Maka ajụjụ ma ọ bụ nchegbu, biko kpọtụrụ Ọrụ Ahịa / Nzuzo na nkwado@companyhub.com.